Eritrean biyya East Africa (baha Afrikaatti) argamtu yoo tattu dhihaan Sudaniin, kibban Ethiopian, kibba-bahan Djiboutin dangeffamte argamtii. Baha fi kabbi-baha laffa kana Red Sean kan marfamtee yoo tattu, gamma birra Red Sean immo Saudi Arabia fi Yemenitt argama. Dahlak Archipelago fi Hanish Island bayyen akka kutta Eritreatti illallamu.
January 1, 1890 G.Citt Eritrean akka colony Italy fudhatamtee turtee. Eritrean amma kuni billisumma Ethiopia irra kan argatte warrana wagga sodammaffi geggefamen bodda. Warranni kunis bara 1961 hanga 1991 geggefame. Constitutioniin Eritrea bara 1997tti ba'e akka ibsettie Eritrean Presidential repblic yoo tattu Unicameral Parliamentary Democracy qabdii. Haa ta'u malee sababa warrani Ethiopia fi Eritrea jiddu May 1998 jalqabbeffi, Eritrean serra kana hojji irra olchu hin dandenne.
Eritrean biyya afaan fi adaa adda adda qabdu fi gossa amantii lamma qabdi, kunis Sunni Islam fi Oriental Orthodox Christianity dha. Eritrea kessatti gossa sagalitti argamu. Eritrean afaan biyyaffi murteffame hin qabdu, haa ta'u malle biyya kessatti afaani gossa sadii hojjatta, kunis Tigrinya, Arabic fi Italian dha.
Retrieved from "http://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Eritrea&oldid=22418"	Categories: AdunyaAfrikaa	Navigation menu
"Account"ii banuLog in	Namespaces
Kutaa Kan Barbada	Afaan Birran
This page was last modified on 8 Bitootessa 2013, at 00:32.